Gaadiidku ma bilaash noqon doonaan inta lagu guda jiro ciidaha Kocaeli? Akçaray Ma Ka Shaqayn Doontaa Dabaaldegga? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliGaadiidku ma bilaash noqon doonaan inta lagu guda jiro ciidaha Kocaeli? Akçaray Ma Ka Shaqayn Doontaa Dabaaldegga?
Gaadiidku ma bilaash noqon doonaan inta lagu guda jiro ciidaha Kocaeli? Akçaray Ma Ka Shaqayn Doontaa Dabaaldegga?
23 / 05 / 2020 41 Kocaeli, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
Gaadiidku miyuu xor ku noqon doonaa fasaxa Kocael?
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay siin doontaa gaadiid bilaash ah muwaadiniinta heeganka ah inta u dhaxaysa 52 - 07.00, 09.00 - 17.00 oo leh 19.00 wado oo bas ah. Adeegyada gaadiidka waxaa la bixin doonaa iyadoo loo eegayo saacadaha shaqada ee Axadda, Meey 23,25, Sabtida, May 26, 24 iyo 11. Intaas waxaa sii dheer, xariiqda 17.00ka ah ayaa u adeegi doonta muwaadiniinta inta u dhaxaysa 20.00 - XNUMX.
Gaadiidku miyuu xor noqon doonaa inta lagu jiro fasaxa Kocaeli?
DAWLADAHA GAARKA AH EE LAMBAR 200
Iyaga oo bixinaya adeeg garsoor cad oo u dhexeeya Istanbul iyo Kocaeli, xariiqda 200 ayaa adeegyo gaadiid siin doonta muwaadiniinta inta lagu jiro ciidaha. Line 200 waxay bixin doonaan adeegyo lacageed 06.30, 07.30, 17.30 iyo 18.30 laga bilaabo Izmit iyo 07.30,08.30,18.30, 19.30 iyo XNUMX laga bilaabo Kartal inta lagu jiro xannibaadda.
AKÇARAY MA U SHAQEYSO HADALKA
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay bixin doontaa gaadiid bilaash ah muwaaddiniinta laga reebay xayiraadda sababta oo ah bandoowga illaa 52 khadka baska ah. Akçaray taraamka maamuli doono Maayo 23,24,25,26.
WARBIXIN KU SAABSAN E-KOMOBİL
Khadadka iyo waqtiga basaska la dhigay bandoowga wuxuu dhici doonaa inta lagu jiro Ciidul-Fitriga http://www.e-komobil.com ve http://www.kocaeli.bel.tr laga baran karaa cinwaankooda. Macluumaadka rakaabka waxaa lagu bixin doonaa iyada oo la wadaagayo macluumaadka xisaabaadka warbaahinta bulshada ee Dawladda Hoose ee Magaaladda.
Talaabooyin cusub oo ku socda gaadiidka Kocaeli '' Akkaray wuxuu bilaabay duulimaad ''
Gaadiidka iyo Baakooyinka ee Bayram ee Kocaeli Bilaash
Gaadiidka Maalgashiga Kocaeli 4 Day Free
Gaadiidka bilaashka ah ee musharaxiinta ee Bayram ee Kocaeli
Degmada Kocaeli ee Magaalada Akcaray waxay bilowday Shaqada
150 kun oo rakaab ah ayaa dhaqaaqay Fanaanka Akçaray Tram
Gaadiidka Kocaeli wuxuu xor u yahay fasaxyada iyo diinta qaranka
Kocaeli Dadka Ayaa Ka Qaadan Doonaan Shilalka Akjaray Line
Khadka toosan ee Akramaray Tram Line ayaa kusii fidi doona garoonka Kocaeli
Akcaray oo la balaarin doono garoonka Kocaeli Stadium
Maanta taariikhda: 17 Juun 2017 Adeegyada taraafikada Akçaray ee Kocaeli
Maanta taariikhda: 17 Juun 2017 Akademi oo ku yaala Kocaeli
Dhagaha Naafada ah ee Dhagaha la 'ayaa safar ku qaadanaya Kocaeli iyaga oo wata Akçaray
Kiev Subway ayaa mar labaad bilaabatay laba bilood kadib
Ka dib Corona Camp, Caravan, Ciyaaraha Dibadda Waxay Sameyn Doontaa Kulan
Duulimaadyada Diyaaradda Israel ee El-Al Airlines waxay mar labaad u bilaabaneysaa Turkiga
Booqashada Fasaxa ee loo yaqaan ESHOT oo uu leeyahay Madaxweyne Tunç Soyer
Nidaamka Saxeexida Isgoyska Mevlana Isugeynta Cusboonaysiinta
Duqa Magaalada Soyer wuxuu baaraa Mashruuca Dabeecadda Dabiiciga Dabka ee Flamingo
Magaca booliiska shahiid wuxuu ku noolaan doonaa Afrika
Waxyaabaha ku saabsan ESHOT, Khariidadaha Joojinta ESHOT iyo Khadka Khadka Tooska Habeenkii ESHOT
Duqa Magaalada Yüce: 'Waxaan Diyaariney 2 Waddo Oo Loogu Talo Galay Mashruuca Sakarya Light Rail System'
Tareenka Xawaare Sare Ma joogsan doono Degmooyinka Kocaeli iyo Sakarya!
Shirkadda El-Al Israel ee fadhigeedu yahay Israel ayaa joojisay duullimaadyadeedii ay ku tagi jirtay Turkiga 13 sano ka hor, sannado badan ka dib, sida lagu sheegay bayaanno ay sameysay shirkadda, oo ay ku jiraan duullimaadyada xamuulka ee shirkadda toddobaad kasta 2 [More ...]
BMC si casriyayn loogu sameeyo 84 Leopard 2A4 Taangiyada; Taliska Ciidamada Dhulka ee Turkiga wuxuu sii wadaa howlaha casriyeynta ee taangiyada waaweyn ee dagaalka (AMT) agabkiisa. Macnaha guud, ka hor [More ...]
Guddoomiye kuxigeenka Erciyes wuxuu u shaqeyn doonaa bilaash dhamaadka xilli ciyaareedka
Gawaarida waayeelka ah waxay hoos ugu dhigi doonaan Kocaeli